Det här gäller för sjukvården i Skåne i och med covid-19 - somaliska
Cudurka loo yaqaanno [covid-19] dartiiisa waxaa xarumaha daryeel-caafimaadeedka Skåne ka hirgalay
Det här gäller för sjukvården i Skåne i och med covid-19 - somaliskaThe content concerns Skåne
Halkaan ka aqriso nidaamyada ka hirgaleen xarumaha daryeel-caafimaadeedka Skåne, oo u sabab ah fayruuska cusub ee loo yaqaanno [coronaviruset] iyo cudurka loo yaqaanno [covid-19].
Haddii aad xannunsan tahay gurigaaga iska joog
Xannuun miyaa dareemaysa? Xaaladaas sidii aad qof kale ugu daaran awgeed waa inaad guriga iska joogta. Sidoo kale waa inaad gurigaaga iska joogta xitaa haddii in yar aad dareemayso inaad xannuunsan tahay.
Cudurka loo yaqaanno [covid-19] waa sida hargabka oo kale. Waxaad dareemi kartaa qandho, qufac iyo dhuun-xannuun. Laakin dadyooga badidooda hab naftooda halis u ah ugu ma xannuunsadaan, mana u baahna in ay booqdaan xarumaha daryeel-caafimaadeedka.
Booqo barta internetka ee Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten]. Waxyaalaha aad halkaas ka aqrisan karto waxaa kamid ah naseexooyin xiriir la leh sida aad ugu hortegi karto, in cudurka lagugu daarto ama aad adiga qofka kale ku daarato. Waa naseexooyin ku qoran luqado badan oo kala duwan.
Warbixin ku qoran luqado kala duwan oo ku saabsan cudurka [covid-19] ka aqriso barta internetka Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten]
Haddii aad dareemayso inaad aad u xannuunsan tahay raadso daryeel-caafimaadeed
Ma dareemaysa xannuun aad u darran? Xaaladaas khadka taleefanka kala xiriir rugta daryeel-caafimaadeedka ee aad ka tirsan tahay ama 1177.
Booqashada xarumaha daryeel-caafimaadeedka kahor waa inaad ballan qabsata
Daryeel-caafimaadeed miyaad u baahan tahay? Ama shaybaar miyaa lagaga tusaale qaadayaa rugta daryeel-caafimaadeedka? Xaaladaas waa inaad marka hore khadka taleefanka kula xiriirta rugta daryeel-caafimaadeedka aad tirsan tahay kaddib ballan qabso. Maxaayeelay xarumaha badidooda sidii berri hore ballan la´aan [drop-in] lama booqan karo.
Haddii aad ballan ciribtirto uma baahnid inaad kharash bixiso
Ballan qabsashada kaddib hargab miyaa kugu dhacay? mise qandho, qufac ama dhuun-xannuun? Xaaladaas waa inaad ballanka ciribtirta. U ma baahid inaad wax kharash ah bixiso iyadoo fiirogaar aan la siin goorta aad ballanka ciribtirtay.
Suuraggal ma aha in qof kasta cudurka loo yaqaanno [covid-19] laga baaro
Suuraggal ma aha in dhammaan dadka xannuunsan laga baaro cudurka loo yaqaanno [covid-19].
Xaaladaha qofka laga baari karo cudurka loo yaqaanno [covid-19] waxaa weeyaan:
Haddii qofku daryeelida xannuunka dartiisa isbitaal loo seexiyo.
Haddii qofku u waayeel yahay oona xannuunsan yahay, kuna nool yahay guryaha waayeellada.
Imminka suuraggal ma ah in qof kale cudurka laga baaro. Nidaamkaas ayaa hirgalay xitaa haddii qofku u dhowan dibada ka soo laabtay ama u la kulmay qof ku dhacay cudurka loo yaqaanno [covid-19].
Waa mamnuuc/laguma oggola inaad wehel u noqoto ama booqato qof daryeel-caafimaadeed u baahan
Waa mamnuuc/laguma oggola inaad wehel u noqoto qof booqan doono xarumaha daryeel-caafimaadeedka. Sidoo kale, laguma oggola inaad booqato qof daryeel-caafimaadeed awgiis ku jira isbitaal. Dhammaan isbitaallada waxaa ka hirgalay mamnuucida booqoshooyinka.
Taasoo ujeedadeeda tahay in laga hortago in shaqaalaha daryeel-caafimaadeedka iyo bukaan-socodyada cudurka la qaadsiiyo cudurka loo yaqaanno [covid-19]. Haddii nidaamka hirgalay iyo in kale laga weecan karo waxaa go`aankeeda iskaleh shaqaalaha daryeel-caafimaadeedka.
Waalidiinta aan lahayn qandho, qufac ama dhuun-xannuun waxay ilmahooda u wehlin karaa goobaha daryeel-caafimaadeedka. Sidoo kale, waalidiinta waxaa loo oggol yahay in ilmahooda ay la joogaan haddii daryeel-caafimaadeedka dartiisa isbitaalka la seexiyo.
Haddii aad uur leedahay oo degan tahay Skåne nidaamkaan ayaa ku khuseeya